मेरो अध्यक्ष केपी ओली नै हो « हातमा खबर-जहाँ तपाइँ, त्यहीं खबर
मेरो अध्यक्ष केपी ओली नै हो
प्रकाशित मिति : २०७७, २५ माघ आईतवार १९:५४
आरती भण्डारी ।
अर्को महाधिवेशनले नया नेतृत्व प्रदान नगर्दासम्म मेरो अध्यक्ष केपी ओली नै हो । एमालेदेखि नेकपासम्मको विधानले, माधव नेपालदेखि प्रचण्ड कमरेडसम्मले स्वीकारेको अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीलाई मैले कसरी नस्विकारौँ ? विधिबाट बनेको अध्यक्षलाई महाधिवेशनबाटै फाल्नुपर्छ, नत्र स्विकार्दै अगाडि बढ्नुपर्छ ।
दोबाटो, चौबाटो, चियापसलमा मेरो बिषयमा साथीहरुले चिन्ता लिंदै गफ गर्नुभएछ । अब मेरो भविष्य छैन पनि भन्नुभएछ । सायद मैले माक्र्सवादी दर्शन पढिरहँदा उहाँहरु ज्योतिषविज्ञान अध्ययन गर्दै हुनुहुन्थ्यो क्यार । तर चिन्ता नगर्नुस् मेरो राजनीतिक भविष्य बिग्रनु या सप्रनुमा मलाई चिन्ता छैन । तर म पार्टीको विधान अवश्य मान्नेछु । सफलता असफलता त कृयाशिलतामा निर्भर गर्दछ । पार्टी एकताको उत्साह क्षणभरमै तहसनहस हुँदा दुःख त लागेकै छ । तरपनि नेता भन्दा नीति प्रधान हुन्छ भन्नेकुरा मैले भुल्न सक्दिन ।
आज आमकार्यकर्ता अन्यौलमा हुनुहुन्छ । यो लामो कालखण्डमा धेरै गोरेटो पार गरियो । धेरै साथीहरुको साथ मिल्यो, कतै यो विभाजनले हाम्रो मन, हिजोको स्नेह र साथ टुट्ने त होइन भनेर आमकार्यकर्तालाई चिन्ता लागेको छ । म एमालेको संगठित सदस्य भइरहँदा मैले भोट हालेर जिताएर पठाएका महाधिवेशन प्रतिनिधिले बनाएको अध्यक्ष केपी ओली हुनुहुन्छ ।
हिजो एमालेको विधानले अनि आज नेकपाको विधानले स्वीकारेको अध्यक्ष केपी ओली नै हो । अनि मेरो नैतिकताले कसरी स्वीकार गर्छ कमरेड अरुलाई ? विधि र पद्धतिको कुरा गर्ने हो भने हिजो महाधिवेशन पश्चात माधव कमरेडले र पछि पार्टी एकता पश्चात प्रचण्ड कमरेडले समेत स्विकारेको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री केपी ओली नै हो, मैले आजसम्म कुनै नेताको नाम लिएर गाली गर्ने हैसियत राखेकी छैन र राख्दिन पनि ।
आज पनि म सम्पूर्ण नेता कमरेडहरुलाई सम्मान गर्छु । केन्द्रीय राजनीतिले सिधै स्थानीय स्तरमा प्रभाव पारेको छ र एक अर्कालाई दोषरोपण पनि गरिएको छ । पार्टी विभाजन हुनुमा आमकार्यकर्ता दोषी नहुँदा नहुँदै पनि एक अर्काप्रति दूरी कायम भएका छन् । तर मैले यो संस्कार कहिल्यै सिकिन । म आज पनि उत्तिकै सबैलाई आदर गर्छु,उत्तिकै सम्मान गर्छु,।